I-lake Ingol emangalisayo (isifunda saseKrasnoyarsk) ingenye yamaparele aqhakazile emigexo yamachibi aseSharypov. I-geography yezivakashi eziza kuyo zihluke kakhulu: kusuka kwazakhamuzi zendawo kanye nezivakashi ezivela ezindaweni eziseduze zaseSiberia ukuya eMascovites nasePetersburgers.
Ensimini, ehlala cishe ngo-4.2 km 2 , ilele i-Ingol Lake. Isifunda saseSharypovo, esisezintabeni zakwaZuznetsk Alatau, sibhekwa ngokufanele esifundeni sezibi futhi sihlangana nesifunda saseKemerovo.
Eduze echibini, ukuphakama kwawo ngaphezu kwezinga elwandle kungamamitha angu-312, kunezindawo ezimbili ezincane - Ivanovka neSenokino. Akukude nabo isiteshi "Ingol" (isitimela), okuvela kuyo abaningi abanemithwalo yokuphumula endaweni yokuphumula. Isigodi somfula i-Uryup sinamathele emzimbeni wamanzi eceleni kwengxenye enkulu yogwini.
Indawo enhle yokuzijabulisa ehlukahlukene yiLake Ingol. Ungafika kanjani ngemoto? Uma usuka eKrasnoyarsk, khona-ke kuhambisana ne-M-53 kubalulekile ukuthuthela ku-Akinsk, bese ubuyela eNazarevo futhi, lapho usuqedile le ndawo yokuhlala, ungaphuthelwa ukubuyela endaweni yaseZaryanka. Ukuhamba kule ndlela, kufanele uhambe ku-Sharypovo, bese ubuyela ku-BGRES naseDubinino ngase-Sorokino. Enye indlela eholela endaweni yokuphumula i-M-54 Yenisei.
I-Ingol, ehaqwe ngamapulazi aphansi kanye nezintaba zezintaba, ngokusho kwabaningi, ifana nesitsha sefekri egcwele amanzi ahlanzekile. Ichibi elinesimo esingenalutho esingenalutho, ukuguquka okuphawulekayo kwe-glade (kusukela emigodini kuya emadwaleni angaphansi kwamanzi) kuba yindawo ethandwa kakhulu phakathi kwabaningi. Sekuyisikhathi eside bekukholelwa ukuthi kwezinye izindawo ukujula okuphezulu kunesisindo semitha eyi-100.
Noma kunjalo, ucwaningomanje wanqatshwa imibono yabantu futhi wenza ukubukeka okusha kwe-Ingol Lake. Ibalazwe elijulile elihlanganisiwe ngesikhathi sokuhamba kweNayada Club esuka eTomsk ibonisa ukuthi ububanzi obujulile buyizingalo ezingama-39, kanti ukujula okuphakathi kwechibi kuyinto engu-15.5 m.
Ngokuvamile izindawo zamanzi zendawo zifaniswa neBaikal. Izindabakwane zasekhaya zithi iLake Ingol neLake Baikal zixhunywe ngumzila wesimo sangaphansi komhlaba. Ukuhlanzeka kwe-crystal nokubonakala kwamanzi, naphezu kokuba khona kokungcola okuningi, kuchazwa ubukhona besiliva ekubunjweni kwawo. Kuyinto yesiliva ebangela ukuhlanzwa kwemvelo kwendawo yokugcina amanzi, okwenza kube lula ukuhlola phansi endaweni ejulile eyi-10 m. Ngokusobala ukuvumela iBaikal (ubude obude buyi-3.5 km, ububanzi bufinyelela ku-1.5 km), iLake Ingol ayikho indlela Ungamnika isundu somuthi omuhle kuye ngenxa yokukhanga kwakhe okungavamile, kwemvelo kanye nemithi yokwelapha.
Inganekwane yomthombo onika ukuphila
Izakhamuzi zendawo zithanda kakhulu ukutshela inganekwane ngokuphila okuvela eLwandle Ingol. Omunye umndeni ovelele wavele waba nendodana eyodwa. Kodwa akekho ophulukisiwe nabodokotela abangenakukwazi ukusiza indlalifa eyicebile, kungakhathaliseki ukuthi bazama kangakanani. Futhi oyedwa kuphela, u-shaman wasendulo, okhulumisana nemimoya yomndeni walo mndeni, uthe ukubuyisela umfana kubalulekile ukuthola amanzi aphilayo. Ubaba wendodana egulayo echitha isikhathi eside efuna, futhi ekugcineni, wanquma ukubuyela emoyeni wamanzi ahlala kwelinye lamachibi abo. Futhi amanzi, emhawukele, wachaza ukuthi ikhambi elifunwayo lisemgodini wensimbi eyimfihlo, okubonisa indlela eya kuyo.
Kodwa ngesikhathi esifanayo, njengendlela yokukhokha iseluleko, umoya wamanzi wayala umzali ukuba abuyele emuva ebhodleleni lamanzi anika ukuphila, bese eletha njengesipho njalo ngonyaka. Ngemva kwalokho, njengoba kwakushiwo, ngesikhathi esifushane ubaba wanikezwa: indlalifa yabuyiselwa futhi, ngokukhazimulisa abantu bayo, yenze lo myalelo minyaka yonke. Futhi endaweni lapho amanzi aphilayo achithe khona, kwakhiwa umthombo ophilisa ukuphila.
Kusukela ngaleso sikhathi igama lechibi, elihunyushwe ngokuqondile ngolimi lwesiKhakass, lisho impilo enhle ("in") amanzi ("gol"). Nokho, ngokuhamba kwesikhathi abantu baqala ukukhohlwa ngezibopho zabo. Futhi okwamanje akukho muntu owenza noma yiziphi izipho emoyeni wamanzi. Futhi ngakho-ke lokhu kuvame ukuthukuthela futhi ukwethuka, ngenxa yalokho kulesi sichibi lapho kuvela khona amaqhubu athukuthele.
Ichibi Ingol - imfihlo yokuphila isikhathi eside
Ngenxa yabososayensi be-Krasnoyarsk Institute of Physics, izinganekwane zasendulo zingabonwa ngakolunye uhlangothi. I-Lake Ingol isendaweni yezinsika ezinkulu ze-karst, ezixhunywe yiziteshi zokugeleza ngaphansi komhlaba. Ukuthuthela ezindaweni ezikude zezintaba, lezi zingxube zihlinzeka leli chibi libe namanzi amaningi ahlanzekile angaphansi komhlaba. Ekujuleni okukhulu, ukuhambela kwalesi sikole kwakuthola umthombo omkhulu, ngenxa yokuthi kukhona ukungena kwamanzi njalo.
Nguye, ngokubambisana nezinye izici zemvelo (i-karst amatshe e-Devonian isikhathi iqukethe ama-limestones), inomthelela ekulondolozeni ubukhulu bechibi kanye nokungabi khona kwezimpawu zokuma nokuguga ngokwemvelo.
Izihluthulelo ezigeleza ngaphakathi echibini lase-Ingol, zishaya phezulu, zincane kakhulu futhi zizinzile kakhulu ekufikeni kwamanzi. Okudumile kunazo zonke yi-Key Key, esenyakatho yelondolo. Ngisho nasezikhathini zasendulo, abantu bamphatha ngenhlonipho futhi babheka amanzi akhe ephulukisa, ebiza kuye, ngokusho kwemithombo ethile, Iron, kanye nabanye - abangcwele. Kwabe sekukhona isonto elincane lapho imikhosi yenkolo yenziwa khona ehlobo. Ukusuka eningizimu kuya echibini kugijima i-Dry Key encane encane, futhi kusukela empumalanga - Nameless. Lezi zitshalo ezincane zanda ngendlela enhle ngesikhathi sehlobo, kanye nangesikhathi semvula enamandla kakhulu.
I-Lake Ingol (okufanekiselwe kulesi sihloko) cishe i-shape-oval shape, ibhange elibushelelezi kanye nokungabi khona okuphelele kwama-bays nama-bays, kudonsela abantu abaningi abangenandaba nezithakazelo ezinhle kakhulu.
Izici zokukhululeka zikuvumela ukuba uhlole indawo yamanzi cishe noma yikuphi, futhi ukuhlanzeka kwamanzi kunika abavakashi ithuba lokuba babuke phansi, okuyinto ebonakala ingacacile. Kusukela ngo-1983, lezi zindawo zinikezwe isimo setshe lesikhumbuzo esingokwemvelo, okuletha izinzuzo ezibonakalayo kuphela. Izibopho ezithile ezivimbela ikhono lomuntu endaweni yesigceme zifanelekile futhi ziqondwe kalula yizivakashi. Akunqatshelwe ukuba nezilwane futhi ugibele ngezikebhe zezimoto nama-scooters. Akuyona nje umoya ohlanzekile, ihlathi elixubekile elihle elivame ukutshala abalandeli balo isikhungo sokuzilibazisa. I-Lake Ingol, ukuba ibe yiyona ndawo, isikhungo sokuzilibazisa segama elifanayo, inikeza amathuba amaningi okuhlela ukuzithokozisa okuhle kakhulu nezingane, izinkampani noma yedwa.
Ezindaweni ezikhona eziqashisayo, ungathatha imishini yezemidlalo ehlukahlukene - kusukela ebhodini nase-badminton kuya emanzini okugwedla kanye nemishayiphi ye-inflatable, imibuthano nemigqomo. Ebusika, ama-snowmobiles angaqashwa lapha. Emidlalweni yetafula ensimini yesisekelo kukhona ama-dominoes, i-lotto, i-chess nabahloli.
Isikhungo sokuzijabulisa "Ingol" inenkantolo ye-tennis, inkundla ye-volleyball kanye ne-basketball, indawo yokupaka egciniwe kanye nolwandle. Endaweni eseduze kukhona esitolo esincane, i-cafe epholile kanye ne-sauna. Ehlobo, ungahlala enkampanini enkulu ekamu lamatende labantu abangu-70, futhi ebusika emphakathini onesizotha - izihlalo ezingama-28. Ngakho-ke, ukuhlala echibini lase-Ingol kungaba mnandi kakhulu futhi akukhunjulwe kunasendlini enhle kakhulu yokubhukuda.
Naphezu kokutadisha okuncane kakhulu kwemingcele yezokwelapha kanye nezokwelapha kulezi zindawo, iLake Ingol ekhulwini le-XIX lajabulela ukuthandwa okukhulu phakathi kwabahlali bendawo kanye naso sonke isifundazwe saseYenisei. Ngaleso sikhathi, odokotela bakhuluma ngokucacile ukuthi kungenzeka ukuthi baphiliswe ngosizo lwezinkinga zokwelapha zendawo ezivela ekukhubazeni, izinhlungu zesifo sofuba, izinqubo zokuvuvukala, izifo nezinye izifo. Amanzi aqukethe i-ion zesiliva, anomphumela omuhle esikhumbeni, ngakho-ke izivakashi ezibona kude ziphuma kulezi zimbiza ngenhlanganisela yokuphulukisa. Ngaphezu kwalokho, izicelo zodaka zisetshenziswe ngempumelelo ekwelapheni amalunga nama-psoriasis.
Ichibi eliyingqayizivele liye laheha inani elikhulu labalandeli bazo zonke izinhlobo zokudoba.
Ukungabonakali kwamanzi ahlanzekile kunomthelela ekuthuthukiseni ukuzingelwa kwamanzi ezindaweni zendawo: ama-trophies avame ukuhamba nge-pike enkulu kanye ne-carp. Ehlobo, kulula kakhulu ukudoba esikebheni ngenxa yelwandle olungajulile. Ngokwesiko, i-perch, i-carp ne-soroga ifakwe kahle echibini, kodwa izimpungushe zamuva, izitshalo ze-croissants ne-peled ziye zavame kakhulu emanzini esiliva, ezijabulisa kakhulu abadobi. Ezindaweni ezijulile ungabamba i-whitefish noma i-ripus.
Ukuwohloka kwesimo semvelo
Naphezu kwayo yonke imizamo yamagunya wendawo kanye nokusungulwa kohulumeni ovikelwe ensimini yelwandle, ezinye izindaba eziyinkimbinkimbi zihlala zingagculiseki kule ndawo yemvelo eyingqayizivele ngempela. Ngokuvinjelwa kwamagatsha ekulobeni, ukulima kwamanye amazwe, ukwakhiwa kwanoma yiluphi uhlobo lwemigwaqo nokubeka imigwaqo, endaweni yeLake Ingol, kuthathwa izinyathelo zokuthuthukisa isigodi sesigodi. Ngakho-ke, ukuze kutholakale izikhungo zokuzilibazisa kanye nezindawo zezemidlalo ezinamabhizinisi amaningana, kunezindawo ezintsha ezinikezwayo, amabhande asehlathini amahle, izindawo zokutshala, imigwaqo inqunywa futhi ichithekile. Izinqwaba zemfucumfucu, izinsalela zomlilo nezindlu zesikhashana, ezishiye ezixukwini zezivakashi nabadobi, zingena emanzini ahlanzekile echibini ngesikhathi samanzi aphezulu asemantwasahlobo, ewuhlasela kakhulu.
Ukunganaki kwabantu, engazi ukuthi imiphumela yomngane wakho unganaki, kungaholela ekudabukeni okukhulu, ekudalweni kwexhaphozi elingcolile, ngokungafani ncamashi nomfanekiso wokuhlanzeka namandla okuphulukisa ukuthi leli pearl lamanzi limelela.
I-Lake Ingol, njengalokho, nokho, enye imithombo yemvelo, idinga isimo sengqondo sokucophelela nesenhlonipho. Futhi ngakho-ke inzalo yethu izokwazi ukubona nokujabulela ubuhle bemvelo esinikezwe kusukela ekuqaleni.
Izwe elihlukile eSerbia: imizi kanye nencazelo yabo